Iindaba -U-Hengxing uthathe inxaxheba kwi-53th CHINA INTERNATIONAL BEAUTY Expo
Lo Mboniso ngowona mboniso mhle waseTshayina, ingqokelela yoomatshini, izinto zokupakisha, iimveliso zokhathalelo lomntu, iimveliso zobuhle bobuchwephesha, izithambiso, ukhathalelo lwempilo njalo njalo.
Oomatshini beHengxing balungiswe ngononophelo, ngenqanaba lobuchwephesha, ukusebenza okuphezulu; izixhobo zetyhubhu ye-ultrasonic yokutywina izixhobo iphinde ibe yinto ephambili kulo mboniso. Uyilo oluhle kunye nesiphumo esihle sokutywinwa kwemathiriyeli eyahlukileyo, kuye kwatsala oosomashishini abaninzi basekhaya nabangaphandle abahlanganisene ukubukela kunye nokudibana ukuze baxoxe. Abathengi abaninzi beze neengxaki zobuchwephesha ekuhlangatyezwane nazo ekuqhubekeni kwendawo, emva kwe-hengxing iminyaka eli-10 yamava iinjineli isikhokelo sobuchwephesha kunye nenkqubo yokwenziwa kwenkqubo, inani lolwaneliseko olukhulu kubathengi, indawo ifikelele kwinjongo zokuthenga.
Lukhenketho lokuvuna. Umboniso, uthengise zonke izixhobo zokubonisa oomatshini, umzekelo, abathengi bethu baseVietnam bayalela ukuba kusetyenziswe ityhubhu ye-ultrasonic yokugcwalisa umatshini wokutywina kwimiboniso, kwaye sibuye neengcebiso ezininzi ezivela kubasebenzisi bokugqibela kunye nabathengisi.
Izixhobo zoomatshini beHenxging kwimveliso yecandelo lokutywina ityhubhu ye-ultrasonic yenze uphuhliso lwexesha elide kunye nempumelelo kule minyaka idlulileyo; kukho ilifa lemveliso ethile, ukukhula kwesandi. Ngesakhono esihle sokuthengisa izakhono, nkqu nakwintsimi yezixhobo zokutywina ze-ultrasonic zikwisikhundla esibalulekileyo. kodwa siyazi ukuba "umgama omde ekufuneka uhambe ngawo. Siza kuqhubeka nokuphucula inkqubo yolawulo, ukukhawulezisa inkqubo yokufaka uphawu kumatshini weHengxing, ubuso obunengqondo kwimfuno yentengiso, ukwenza umatshini osemgangathweni kunye nenkonzo kubathengi nakwizihlobo.